अझै महाकालीमा तुइनकै भर, बनेन झोलुङ्गे पुल ! — Himalisanchar.com
दार्चुलाका व्याँसवासी अहिले पनि उर्लंदो महाकाली वारपार गर्न तुइनमा ताङ्लोकै भर पर्नुपरेको छ। वर्षौँ देखि स्थानीयवासीले महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउन अनुरोध गर्दा पनि कोही कसैबाट माग पूरा नहुँदा व्याँसीवासीले नदी वारपार गर्न तुइनकै भर पर्नुपरेको हो।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थिए। घोषणाअनुसार २०७४ असोजभित्रै तुइन विस्थापन हुनुपर्नेमा दार्चुलाको महाकाली नदीमाथि लगाइएका आधा दर्जन तुइन अहिले पनि सञ्चालनमा छन्। बर्खाको उर्लंदो महाकालीमा स्थानीयवासीले ज्यानकै बाजी थापेर आवतजावत गर्नुपरेको छ।
उनले बर्खाको समयमा नदीवारपार गर्न निकै डर छ। ज्यानकै बाजी राखेर वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तुइन नभए खानलाई अन्न हुँदैन। चामल त्यही भारत गएर ल्याउने हो भन्नुभयो। दुम्लिङका बुढाथोकीले भने, ‘नेपालतिरबाट खच्चड आउने बाटोसमेत भत्किसक्यो। व्यासको सुनसेराको तुसरपानीमा पहिराले बाटो अवरुद्ध भएको छ।
गाउँमा चामल पाउँदैन। तुइन लगाएर पारिपट्टिबाट ल्याउन पनि निकै समस्या छ।” उहाँका अनुसार भारतीय एसएसबीले देख्नेबित्तिकै समातिहाल्छन्। उनीहरुको आँखा छलेरै ओसारपसार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिले बर्खाको समयमा त निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ।
झोलुङ्गे पुल निर्माणमा ढिलाइ !
यी दुवै ठाउँमा खम्पाचे रुविना जेभी काठमाडौँले झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि कूल दुई करोड ७३ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। यस्तै बाकु र बडुगाउँमा मालिका निर्माण सेवा कञ्चनपुरले झोलुङ्गे पुल निर्माणको ठेक्का पाएको छ। दुवै ठाउँको पुल निर्माण गर्न कूल रु दुई करोड ५५ लाख ६४ हजार लागतमा सम्झौता भएको थियो।
अहिले बाकू र बडुगाउँमा पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, सस्पेन्शन ब्रिज डिभिजनका इन्जिनीयर अजय यादवले भने। व्यवसायी कुँवरका अनुसार नेपाल भारत दुवैतर्फ पुल निर्माणका लागि चाहिने सामग्री जम्मा गरेको हराउन थालिसकेको छ।
फाउन्डेशन पनि पुरिनथालेको छ। तर अझै समान नआउँदा काम गर्न समस्या भएको छ। बाकु र बडुगाउँमा भने असोजभित्रै निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको निर्माण व्यवसायी दीपक साउँदको भनाइ छ। यसअघि दार्चुलाकै व्यास गाउँपालिकाको तिगरम, लेकम गाउँपालिकाको लाली र मालिकार्जुन गाउँपालिकाको जोलजीवीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको छ। -रासस